Bandhig faneedka Columbus 2022 waxa uu keenay in ka badan 60 bandhigood saddex marxaladood - Columbus Arts Fest
COLUMBUS, Ohio- Bandhig faneedka Columbus 2022, oo ay soo bandhigtay American Electric Power Foundation oo ay soo saartay Golaha Farshaxanka ee Greater Columbus (Golaha Farshaxanka), ayaa ka muuqan doona in ka badan 60 bandhigyo bilaash ah oo ku faafay saddex marxaladood oo dhan dhammaadka fasaxa Festival, Juun 10-12 . Wabiga hoose ee magaalada ayaa la noolaan doona wax kasta oo laga bilaabo jazz, rock, reggae, folk, R&B iyo muusig salsa ilaa sheeko-sheeko, gabayo, qoob ka ciyaarka casriga ah iyo masraxa.
The ABC6 Barxadda Beerta ee Bicentennial waxa uu soo bandhigi doonaa bandhigyo cinwaano bilaash ah usbuuca dhamaadkiisa. Jimcaha, Juun 10keeda, 8:30 fiidnimo, Xafladdu waa soo dhawaynaysaa Shadowbox Live fulin Awoodda ubaxa: Muusiga iyo Dhaqdhaqaaqa, abaal-marin loogu talagalay hab-musiga iyo dhaq-dhaqaaq dhaqameedkii 1960-kii iyo 1970-aadkii. Sabtida, Juun 11keeda 9-ka fiidnimo, masraxa wuxuu martigeliyaa Edinburgh, Scotland indie rock band Waxaa naloo ballan qaaday Jetpacks. Furitaanka Baakadaha Jetpacks waa naloo ballan qaaday waa socdaal heer qaran ah Asxaabtii Jilicday 5-ta galabnimo, waxaa ku xiga Columbus jecel Mr Anderson saacada 6:45 galabnimo Bandhiga cawayska waxaa maalgeliya Huntington National Bank iyo Worthington Industries Foundation.
Marxaladda ayaa martigelin doonta bandhigyo badan inta lagu jiro Bandhigga, oo ay ku jiraan Al Son del Iya Salsa Laatiinka Jazz Orquesta, Mowjadaha de Aché iyo QIIMAHA GUUD Jimcihii. Sabtida waxa ka muuqda qoob ka ciyaar iyo riwaayado laga soo bilaabo Ciyaartoyga Celtic Columbus, Masraxa carruurta Columbus, Kooxda MuLan Guzheng, Dhaqdhaqaaqa Afoot iyo kuwo kale. Axadda ayaa bilaabanaysa Shirkadda Qoob ka ciyaarka Casriga ah ee Columbus, oo ay ka mid yihiin TBD: Muusigga la hagaajiyay, qoob-ka-cayaaraha Folk Hillel iyo in ka badan ka hor inta aan la dhammayn hab-dhismeedka jazz ee Dabeelaha.
The Marxaladda Muusikada ee Weyn, oo ay kafaalo qaaday CoverMyMeds, waxay ku soo noqotaa buundada tareenka hoosteeda ee wadada Rich ee u dhow 400 West Rich. Marxaladu waa qayb ka mid ah Tuulada Farshaxanka ee Weyn ee ku taal albaabka Franklinton ee Festifaalka, waxayna ka muuqan doontaa in ka badan 20 bandhig oo leh fadhiyo badan, miisas, iyo iibiyayaal cunto iyo cabitaan ah oo dhow. Jimcaha waxaa ka mid ah falalka sida Roots Society, Daawo Jaceylka, Holly Moretti iyo Zoo Trippin', halka sabtida ay muuqato Deal Breakers, Lily Bloom, Bandhiga Bandhigga Weyn ee Bandooga, Meelaha qotada dheer, Iyo Kelly Zullo & The Invisible Circus. Axada dhammaatay Malab & Buluug, James Quartey, Iyo Topher James & Guutada Biscuit, iyo kuwa kale.
The Marxaladda Xarunta Fanka Dhaqanka waxay martigelin doontaa muusig toos ah, abwaanno, sheeko-yaqaanno, sheeko-yaqaanno iyo qoraa sheeko-gaaban maalmaha Sabtida iyo Axadda. Marxaladda yar waxay bixisaa meel xasilloon oo hadh leh si loogu raaxaysto bandhigyada barxadda Xarunta Farshaxanka. Sabtida naso oo la kulan noocyo kala duwan oo qoraa iyo sheeko-yaqaanno ah iyada oo loo marayo kooxaha sida Guriga Thurber U rogo bogga joornaalka suugaanta ee dhalinyarada, Ururka Gabayada Ohio, Cun hadalkayaga iyo kuwo kale. Sabtida 5 galabnimo labada fanaan Wadooyinka Starlit samayn doonaa set acoustic ah oo ay ku xigto ah Haweenka Madaw Oo Ku Kacay Gabay Wadareed iyo Habeenka Gabayga ee Qorayaasha. Axada waxay soo dhawaynaysaa akhrinta laga bilaabo Shaqooyinka Xoriyadda, The Columbus Anthology iyo ururinta abwaannada.
Grass Patch Masraxa
Waxaa kafaala qaaday PNC oo uu sameeyay Masraxa carruurta Columbus, Tiyaatarka Grass Patch ee u dhow Tuulada Hawlaha Gacan-ku-oolka waxay bixisaa jadwal xiiso leh oo dhacdooyin ah dhammaan saddexda maalmood ee Bandhigga. Hawlaha waxaa ka mid ah bandhigyada masraxa oo muujinaya muuqaalada masraxa ee soo socda 2022-23 xilli kasta oo xitaa saacad kasta gudahood saacadaha Damaashaadka (10 subaxnimo, duhurkii, 2 galabnimo, 4 galabnimo iyo 6 galabnimo) Aqoon-isweydaarsiyada horumarinta ee ay ku jiraan ardaydu waxay ka dhici doonaan meesha ugu sarreysa saacad kasta oo khayaali ah gudahood Saacadaha xafladda (11 subaxnimo, 1 galabnimo, 3 galabnimo iyo 5 galabnimo).
Bandhig faneedka xaflada waxaa kaabaya fanaaniin kala duwan oo wadooyinka ku sugan iyo fannaaniin ku kala firirsan fagaaraha xaflada.
Fiiri liiska bandhigyada oo dhameystiran columbusartsfestival.org/visit/performance-schedule.
ABC6 Bicentennial Park Stage waxa ay siiday aagagga fadhiga VIP inta lagu jiro bandhigyada fiidkii ee martida iibsatay Xidhmada Macaamiisha. Labada marxaladood ee waxqabad ee kale waxay lahaan doonaan kuraas iyo miisas, oo ay ku yaalliin iibiyeyaasha cuntada iyo cabitaanka si ay macaamiishu u qaboojiyaan, ugu raaxaystaan ​​​​cunto oo ay u daawadaan mid ka mid ah madadaalada waaweyn ee Columbus.